နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ကြိုဆိုရင်း သတိတရ ၀င်ရောက်နှုတ်ဆက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ကြိုဆိုရင်း သတိတရ ၀င်ရောက်နှုတ်ဆက်ခြင်း	10
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ကြိုဆိုရင်း သတိတရ ၀င်ရောက်နှုတ်ဆက်ခြင်း
Posted by manawphyulay on Apr 8, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary | 10 comments
“HAPPY THINGYUN FESTIVAL & MYANMAR NEW YEAR”
မြန်မာနှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်နေ့လေးများကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ
Manawphyulay မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။
မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၈) ခုနစ် နှစ်သစ်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်သည့် ဘ၀များကို သာယာဖြောင့်ဖြူးစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပြီး ယခုလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ဆထက်တပိုးအောင်မြင်ကြပါစေကြောင်း မနောဖြူလေး မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့ရက်လေး ဖြစ်ပါစေ.. အားလုံး မှတ်မိသေးရင် ကော့မန့်တစ်ချက် တို့ပေးခဲ့နော်….
အားလုံးကို အမြဲ သတိရ ခင်မင်လျှက်
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: မနော သခေါ အပေါ စကော
ပန်တော် ဦး says: မင်ဂါပါရှင့် “HAPPY THINGYUN FESTIVAL & MYANMAR NEW YEAR” ပါ အစ်မ အနော့် ကို ဒီ site လေးထဲ အလည်ခေါ်တဲ့ အတွက် သိုင်းကျူး ပါရှင့် !
သင်္ကြန်တွင်း မိသားစု ပုံလေးဒေ ရိုက်ဖြစ်ရင် တင်ပေးဦးနော် !
၂၁.၄.၂၀၁၆ မှ ပြန်တွေ့မယ် :P
ဒီတနင်္ဂနွေကျရင် လာဦးမယ်ဗျိုးးး ခေးလေးဆီ လာလည်မယ် အာ့ကျမှ အစ်မသမီးလေး ကို တ၀ကြီး ထိန်းပေးမယ်နော် Hee Hee Hee
့Dear Pan Taw Oo (Khin Zar Chi Oo) Peace !
kai says: သမီးလေးရနေပြီပေါ့….။
ဘ၀ဆိုတာ… တယောက်ဆင်းတယောက်တက်.. ဆက်လက်သွားနေတာပါပဲ…။
manawphyulay says: ဟုတ်ပါတယ်တဂျီး
တစ်ယောက်ဆင်း တစ်ယောက်တက်ကို နားလည်ထားပေမယ့် ပုထုဇဉ်လူသားပေမို့ သံယောဇဉ်တော့ အမှန်တကယ် ဆင်းတဲ့သူကော တက်တဲ့သူကော မပြတ်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ယောင်းခမဂျီး… နေကန်းလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ မနောရေ။
manawphyulay says: မင်္ဂလာရှိသော နေ့ရက်လေးများ နှစ်သစ်မှာ ဖြစ်ပါစေ..
ခင်ဇော် says: မနော တို့ မိသားစု
Thint Aye Yeik says: မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ချိန်ခါ သမယ ပါ မမ မနော
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဆံရှည်သခင်မရေ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ အဲဒီကာလတွေကိုလွမ်းတယ်